सलीम संसार->>A complete Nepali blog site: गुरुकुलमा नाटक "सेतो कपाल" को मन्चन सुरु
गुरुकुलमा नाटक "सेतो कपाल" को मन्चन सुरु
भनाइ नै छ,'मान्छे बूढो भए'नि मन बूढो हुँदैन ।' यो बूढो नहुने मनले मान्छेलाई कस्तो खाडलमा लगेर जाकिदिन्छ ? गुरुकुलमा शुक्रबारदेखि मञ्चन सुरु भएको नयाँ नाटक 'सेतो कपाल' हेरेपछि सबैको मन यसरी नै सिरिंग हुन्छ । अनेकौं अभाव, दुःख र पारिवारिक दायित्वबीच निरन्तर चलिरहने घटनाक्रमहरूलाई जोड्न खोजिएको नाटक खासमा यौन मनोविज्ञानको डोरीमा गाँसिएका घटनाक्रमहरूको माला हो, जसलाई रंगकर्मी विजय विस्फोटले स्टेजमा उतारेका छन् । गुरुकुलले उनको नाटकमार्फत पहिलोपटक आमन्त्रित निर्देशकलाई स्थान दिएको हो । नाटकको कथालेखन पनि विस्फोटले नै गरेका हुन् ।फलामको पाइप, ड्रम...
र काठको लाम्चो बाकस प्रयोग गरी बनाइएको सामान्य मञ्चका लागि सुनील पोखरेलले प्रकाश परिकल्पना गरेका छन् । स्टेजमा प्रकाश पोखिँदा निम्नवर्गीय सानो परिवार बस्ने फ्ल्याटको दृश्य देखिन्छ, जहाँ एक नाटककार अध्ययनरत छन् । कुमार अग्नि नामक यिनै नाटककारको वरिपरि नाटकको कथानक घुम्छ । उनी नाटकमा जे लेख्छन्, गर्छन्, जीवनमा अर्कै भोग्छन् । कुनै समय उनले सोचेको प्रेम र जीवन भोग्दै जाने क्रममा पछि बेग्लै विन्दुमा आइपुगेर रन्थनिन्छ । बुढेसकालले छोप्दै लागे पनि मानिस आफूलाई तन्नेरी सावित गर्न किन चाहन्छन् ? राजन पुडासैनीले गरेको कुमार अग्निको भूमिकामा दर्शक तानिंदै जान्छन् । युवतीहरूले अंकल भनिदिँदा, घरकी श्रीमतीले टाउकामा सेतो कपाल औंल्याइदिँदा उनको चित्त दुख्छ । उनी झ्यालमा बस्छन् र परतिरको कौसीमा उभिरहेकी किशोरीलाई स्याउ टोक्दै जिस्क्याउँछन् । तिनै किशोरी युवतीको चञ्चलता र उमेरजन्य मनोविज्ञानसँग उनी आफ्नो बितेको समय तुलना गर्छन् र बदलिएका स्वभावहरूप्रति विरोध जनाउँछन् ।
निम्नवर्गीय पात्रहरू उभ्याइएको नाटकमा प्रेम र विवाहपछिको विरोधाभास पनि प्रकट हुन्छ । प्रेममा परिरहेको बेलाको रुमानी काल्पनिकता र विवाहपछि भोग्नुपर्ने डरलाग्दो यथार्थता दुवै भोग्छन् कुमार अग्नि । उनलाई साथ दिने युवती छिन् सिमल -अरुणा कार्की), जो लोग्ने मान्छेहरूले परिभाषित गरिदिएको सीमारेखाभित्र भविष्य कोर्न अभिसप्त छन् । लोग्नेले जत्तिकै अलिकति स्वर ठूलो पार्नेबित्तिकै तिनले घरबाट गलहत्याइनुपर्छ । किचकिचे, शंकालु र परिजीवीको आरोप खेप्नुपर्छ । पुरुषहरूको यौन मनोविज्ञानमा बाँधिएको भएकाले पनि नाटकमा महिला पात्र खासै शक्तिशाली छैनन् । उनीहरू कि पुरुषहरूको कल्पना र सपनामा आउँछन्, कि लोग्नेलाई सघाउने गृहिणीको रूपमा । कुमार अग्निको सपनामा रंगीन भएर आउने युवतीहरू पशुपति राई, सरस्वती चौधरी र प्रमिला कटवालले नयाँ पुस्ते किशोरीको चुलबुले मनोविज्ञानलाई राम्ररी प्रकट गर्छन् । घरभेटी भोलाराज सापकोटा, जँड्याहा कान्छा रामहरि ढकाल, हजुरबा कमलमणि नेपाल र पुरोहित विपिन कार्कीको अभिनय पनि मिठो लाग्छ ।
जँड्याहा कान्छा नाटकमा प्रेममा धोका खाएका पीडित पात्रको रूपमा छन् । श्रीमती अर्कैले भगाइदिएपछि उनको जँड्याहा चरित्र सडकमा उत्रिन्छ । नाटकको अन्त्यतिर पश्चिमाहरूको सांस्कृतिक अतिक्रमणको सिकारको रूपमा उनलाई उभ्याउन खोजिएको छ, जुन नाटकको घटना शृंखलाहरूसँग सिलसिलेवार र प्रासंगिक लाग्दैन । पश्चिमा संस्कृति नबुझेका युवतीहरू पनि लोग्ने छाडेर अर्कैलाई गएको धेरै उदाहरण समाजमा पाइन्छ । यस्तो हुनुमा प्रेमपूर्ण दाम्पत्य जीवनभन्दा पनि पुरुषहरूको हैकम लाद्ने परम्परागत नेपाली संस्कृति पनि कारक बनेको हुन सक्छ । फ्ल्यास ब्याक, सपना र कल्पित दृश्य देखाउने कला नाटकमा रोचक लाग्छ । एउटै सामग्रीबाट कहिले कोठा, कहिले पार्क त कहिले अफिस बनाउन मिल्ने रामहरि ढकालको मञ्च परिकल्पना प्रशंसायोग्य भए पनि लामो समय ब्ल्याक आउट गरेर मिलाइरहनुपर्ने भएकाले दर्शकले झन्झटिलो महसुस गर्न सक्छन् ।
जति बूढो हुँदै गयो, उत्तिकै श्रीमतीप्रति शंकालु र 'पात्तिएको' प्रवृत्ति देखाउन रचिएको हजुरबा र पुरोहितबीचको उपकथाले कुमार अग्निको मूलकथासँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन, जसकारण कलाकारले चरित्रमा उत्कृष्ट काम गरे पनि यो फगत 'मसला दृश्य' जस्तो मात्र भान हुन्छ । निम्नवर्गीय जीवन बाँच्नेहरूको पारिवारिक यथार्थ देखाउन खोजिएको नाटकमा महिलालाई 'शंकालु, किचकिचे र परजीवी' को रूपमा मात्रै औंल्याउनुलाई पुरुष अतिवादी मानसिकताको आरोप लाग्न पनि सक्छ । प्रेममा जोगी नै बन्नुपर्ने नियति र आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ कसरी आइपर्छ ? नाटकको अन्तिम दृश्यले प्रस्ट्याउन प्रयास गर्छ । नाटककार कुमार अग्निले विक्षिप्त भएर अन्तिममा आत्महत्या गर्छन् । यसको कारक पनि उनी स्वयं नै हुन् । अफिसकै एउटी केटीको प्रेममा परेकी उनी परिस्थितिसँग जुध्न नसकेपछि हार्छन् । सेतो कपालले सिर्जना गरेको निराशामाथि अर्को निराशा थपिन्छ र नाटकको दुःखान्तक अन्त्य हुन्छ । यस हिसाबले नाटकलाई निराशावादी भन्न सकिन्छ । उमेर ढल्के पनि यथार्थतालाई अस्वीकार गर्न खोज्ने पुरुष अहम र त्यसले निम्त्याउने निराशाजनक स्थिति नाटकको सार हो । स्रोत: ईकान्तिपुर